कस्तो कपाल भएकाले कस्तो स्याम्पू प्रयोग गर्ने ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home स्वास्थ्य कस्तो कपाल भएकाले कस्तो स्याम्पू प्रयोग गर्ने ?
कस्तो कपाल भएकाले कस्तो स्याम्पू प्रयोग गर्ने ?
स्याम्पूका विज्ञापनमा सुन्दर कपाल भएका मोडल देख्दा धेरै महिलालाई मेरो कपाल पनि त्यस्तै भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। स्याम्पू उत्पादन गर्ने कम्पनीले आफ्नो उत्पादनको प्रभावकारी जानकारी दिन सुन्दर कपाल भएका वा बनाइएका मोडललाई विज्ञापनमा देखाउँछन्। तर, विज्ञापनको पछि लागेर जथाभावी स्याम्पू प्रयोग गर्नु हुँदैन। कपाल र टाउकोको छालाको प्रकृतिअनुसारको स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ।
स्याम्पूमा विभिन्न प्रकारका सामग्रीको मिश्रण हुन्छ। रङ, पानी, सुगन्ध, रसायन, म्वाइस्चराइजिङ एजेन्ट, सिरम, कन्डिसनिङ एजेन्ट, ग्लिसरिन आदि मिसाइएका हुन्छन्। साथै, स्याम्पूलाई आकर्षक बनाउने एजेन्टको पनि प्रयोग भएको हुन्छ। स्याम्पूमा नामाकरण गर्न सजिलो हुने गरी फलफूल, वनस्पति मिसाइएको हुन्छ। कागती, चेरी, मह, गुलाब, काँक्रो, घिउकुमारी, मेहदी आदि मिसाइएको हुन्छ।
साबुनको ठाउँमा कृत्रिम डिटरजेन्ट राख्नुको कारण कपालमा भएको पीएच फ्याक्टरलाई सुरक्षित राख्नु हो। यसले कपाल र टाउकोको छालालाई सुरक्षित राख्छ। सोप र हार्ड वाटरको प्रयोग गरी कपाल नुहाउँदा कपाल सुक्खा हुन्छ र कपालमा क्षति पुग्छ।
तर, कृत्रिम डिटरजेन्ट जुन जैतुन, नरिवल, क्लोइस्टर अइलबाट बनेको हुन्छ, प्रयोग गर्दा पानीसँगै सजिलै घुलेर सफा र स्वस्थ कपाल बनाउँछ। आजकल हामीले प्रायः हार्ड वाटरको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, कृत्रिम डिटरजेन्टयुक्त स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ।
स्याम्पू प्रायः नर्मल, ड्राई, अइली र कलर स्टेमा हुन्छ। कपालको प्रकृति र स्वभावलाई ध्यानमा राखेर स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ। सामान्य अवस्थामा नर्मल स्याम्पू र धेरै नै सुक्खा छ भने ड्राई हेयर स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ।
ड्राई स्पाम्पूमा इमोलियन्ट र कन्डिसनिङ एजेन्ट राखिएका हुन्छन्। चिल्लो प्रकारको कपाल भएकाले ड्राई हेयर स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ। यसले कपालबाट चिल्लोपन हटाउन मद्दत गर्छ। कलर गरेको कपालमा कलरलाई टिक्न मद्दत गर्ने खालको स्याम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ। चाया भएमा एन्टी डेन्ड्रफ स्पाम्पू प्रयोग गर्नुपर्छ।
चाया परेको छ वा कुनै इन्फेक्सन भएको छ भने मेडिकेटेड स्याम्पू प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यसले कपाललाई समस्यामुक्त बनाउँछ। स्याम्पू कपालको प्रकार, प्रकृति, अवस्थाअनुसार प्रयोग गर्न सजिलो हुने गरी बनाइएको हुन्छ। साथै, कपालको बनावटलाई ध्यानमा राखेर पनि स्याम्पू बनाइएको हुन्छ।
स्याम्पूको काम कपाललाई नरम, स्वस्थ र सुन्दर बनाउनु हो। यसको प्रयोगपछि कपालमा चमक आउँछ। भनेको जस्तो स्टाइलमा मिलाउन सजिलो हुन्छ। स्पाम्पू जेल, लिक्विड वा क्रिममा पाइन्छ। आफूलाई मन पर्ने सुगन्धमा स्पाम्पू छानेर आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न सकिन्छ। मिति नाघेका नक्कली स्याम्पूको प्रयोगबाट कपाल र टाउकाको छालालाई हानि पुग्ने हुनाले यसबाट बच्नुपर्छ।
–दही र महलाई बराबर मात्रामा मिलाएर कपालमा लगाउने। ३० मिनेटपछि पानीले धुने। यसो गर्दा कपाल नरम र चम्किलो हुन्छ।
–सुकेको अमला पिसेर पाउडर बनाउने। कपाल धोइसकेपछि चिसो कपालमा नै यो पाउडरमा कागतीको रस हालेर लगाउने। १० मिनेटपछि कपाल धुने। यसबाट कपाल चमकदार र मुलायम बन्नेछ।
–दहीको लस्सी कपालमा लगाउने। केही बेरपछि पानीले धुने। यसो गर्दा कपाल मुलायम हुन्छ।
–मुसुरोको दाललाई दूधमा भिजाउने। बिहान मसिनो गरी पिसेर कपालमा लगाउने। केही बेरपछि धुने। यसो गर्दा कपाल बढ्नेछ र चम्किलो हुनेछ।
–स्याम्पू गरिसकेपछि अन्तिम पटक कपाल धुने समयमा एक मग पानीमा एक कागतीको रस या दुई चम्चा भिनेगर या दुई ठूलो चम्चा बियर हालेर टाउकोमा राम्ररी लगाउने। यसो गर्नाले कपाल बाक्लो देखिन्छ।
महिला हिंसालाई रोक्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
बार्सिलोनाको सामना गर्न निक्कै गाह्रो महसुस हुन्छ : नेयमार